Nitsidika : 2079
Mpianatra tao Ankatso aho ary teo amin'ny resaka dokotera no nosafidiko fa mbola tsy miala ato an-dohako hatrany ny hoe lasa profesora ka tafiditra soa aman-tsara teny aho. Nitohy hatrany moa ny fiarahako tamin'i Fidy nandritran'io fotoana io ka hatramin'ny fotoana izay nisarahanay. Marina izany fa nisaraka izahay taty aoriana kely noho ilay toetranytena niova be taty aoriana. Tsy ilay Fidy fantatro taloha intsony no hitako sy tsapako ankehitriny fa lasa mpisotrosotro, mpifokafoka, tena niova tanteraka mihintsy e. Na izaho aza lasa toa tsy fantany na tsaroany akory ny fisiako ka naleoko izy nialako fa satria diso variana amin'ny rendrarendra loatra ary nalako tsy ho namako anaty facebook intsony izy. I Santatra raha teo koa nanampy ahy sy nanoro hevitra ahy amin'ny fomba ialako lavitra azy sy tsy hafantarako azy intsony mihintsy. Tsy ampy 1 volana taorinan'ny nisarahanay anefa dia hitako miaraka amin'ny vehivavy hafa izy ary ny tena tsy nampoiziko dia noho io nampivarina azy tany amin'ny rendrarendra maro samihafa. Efa 3 volana izay ireo no niaraka hoy ilay naman'ny Santatra iray izay ka teo aho vao tonga saina hoe hay efa 3 volana izay i Fidy no nampirafy ahy sy nanao an'io rendrarendram-piainana io niaraka tamin'io vehivavy io. Tsy nampaninona ahy anefa izany satria koa izahay efa nisaraka sady efa tsy ilay olon-tiako taloha ilay fantatro intsony io. Tokan-tena toy ny tovovavy sasany aho nanomboka teo. Tsy manan'olon-tiana fa irery kanefa na dia teo aza i Santatra namako dia efa manan'olon-tiany koa izy ka tsy afaka niaraka Tamiko firy intsony. Tsy nampanary toky ahy izany hoe tokan-tena izany fa mbola teo ny Ray aman-dreniko nanampy ahy na dia mbola tezitra tamiko noho ny toetran'i Fidy taty aoriana aza i dadanay. Fa tsy nampaninona azy aza ny nahare hoe nisaraka izahay, ka nampiverina azy amin'ny toetrany taloha ilay tsotra lalandava. Izao angamba no anjaram-pitiavako izao angamba no lahatra. Tsy nataoko nisakana ny fianarako anefa izany fa vao maika aza aho nanohy ny fianarako aho. Efa taona lasa aho izay no nianatra ny hanao dokotera. Ity ny taona farany ka nahazo master one aho tamin'ity taona ity ary tafiditra ho dokoteram-panjakana sady efa nanaraka stage ihany mantsy aho tamin'ity taona ity no nianatra ka azoko ihany ilay diplaoma ilaiko sy ny asa tiako hatao. Faly ery ny ray aman-dreniko nahare izany vaovao mahafaly izany ka nanaovanay fety mihintsy izany. Mbola tsy dia tena tiako loatra anefa ny hijanona amin'io marim-pahaizana io fa naleoko nitarina hatrany izany ka sady nanohy ny fianarako aho no nitsabo an'ireo marary madinika teo amin'n toeram-pitsaboana nianarako. Sendran'ny teny an-dalana andeha hiasa niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amiko aho no nahita an'i Fidy lasa mpirenireny eny an-dalambe eny la tohina ihany ny foko nahatazana azy kanefa moa inona moa no azoko atao fa efa safidiny izao.
- manahoana ianao,inona no azo atao anao izay. Tsy mbola fantatro tsara hoe i Lova io noho izahay tsy nifankahita nandritra ny fotoana naharitra kanefa kosa mbola tadidiy ihany aho. Toy izao ny tohin'ilay resaka
- ao fa tantaraiko anao, dia notantaraiko azy ny antony nisarahanay, ny toetrany sy y adalany rehetra.
Mbola mety ho tia ahy ve i Hasina any, nanenina ihany aho taorinan'iny nandavako azy sy nandaingako azy iny. Tena tsy mba mitovy amin'i Fidy tokoa ny toetrany fa mbola hafa. Tsy mba toy iren olona mpirenireny ireny izy fa olona tena nifikitra tamin'ny faniriany ny ho lasa sceniariste. Noheveriko fa nofinofy am-pandriana ilay teny nolazainy Tamiko kanefa hay izy tanteraka avokoa.